Soomaali-American-kii ugu Horreeyay oo loo Dhaariyay Booliiska Magaalada Portland – Radio Daljir
Maajo 30, 2015 1:09 b 0
Sabti, May 30, 2015 (Daljir) — Khaalid Ibraahim oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Portland ee Wadanka Maraykanka ayaa maalinamdii khamiista aqbalay in uu ka mid noqdo ciidamada Booliiska magaaladaas ka dib Xaflad si heer sare ah loo soo Agaasimay oo lagu qabtay Portland.
Qoyska Khaalid, Xubno ka socday jaaliyadda Soomaalida ee Portaland iyo mas’uuliyiin sar-sare oo ka tirsan Booliiska Magaaladaas ayaa ka soo Qayb-galay xafladda loo qabtay Khaalid oo maalin ka hor si rasmi ah uga mid noqday booliska magaaladaas.
“Waa guul weyn oo taariikhi ah “ ayuu yiri Saciid Muuse Olol oo madax ka ah guddiga Soomaalida Oregon ,waxaana uu Olol sheeegay in xiligan la joogo aysan jirin wax buundo ama caqabad ah oo Soomaalida hortaagan.
Khaalid Ibraahim oo 24-sano jir ah ma ahan Qofkii ugu horeeyay oo xil Booliisnimo ka qabta Maraykanka ,waxaase uu noqonaya qofkii koowaad oo ay dowladda Gobolkaas ka dhigto boolis isla markaana ay shaqaalaysiiso.
Xiriirka guddiyada Soomaalida iyo booliska magaalada Portland ayaa ahaa mid wanaagsan tan iyo markii la xidhay Maxamed Maxamuud oo qorshaynayay in uu qarxiyo goob xaflad ay ka dhacaysay oo ku taala magaalada Portland sanadkii 2010-ka,waxaana xadhigiisa ka qayb-qaatay Soomaalida halkaas degan.
Natasha Haunsperger oo asal ahaan ka soo jeedda Waddanka dagaaladu ay ka dhaceen ee Croatia ayaa xiriir gaar ah la wada leh jaaliyadda wadanka ay u dhalatay iyo Soomaalida halkaas dagan oo lagu qiyaaso 8,000 oo qof.
“Kani waa albaab inoo furmay inagga oo dhan ,bulshadeenu ma aysan filaynin in ay qayb-ka noqdaan laamaha dowladda ee halkan “ ayuu yiri Jamaal Daar oo xubin Fir-fircoon ka ah urur ay ku midaysan-yihiin dhalinyarada Afrikaanka ah ee dalkaas ku nool.
Khaalid Ibraahim ayaa laba sano ka hor Muujiyay Xiisaha uu u Qabo in uu noqdo Xubin ka mid ah Ciidamada Booliiska Maraykanka, Waxaana Jamaal uu Sheegay in tani ay ku dhalatay Khaalid markii u u u yimid dhalinyaro ka qayb-galaysay tartan baasketboolka ah oo ka dhacayay Portaland.
Waalidka Khaalid iyo todobo kamid ah walaalihiis ayaa ka soo qayb-galay xafladdii lagu dhaarinayay ,waxaana Walaashii Soah ay sheegtay in Ibraahim hooyadii ay Jeclayd inuu iskuulka aado si uu u noqdo kalkaaliye caafimaad, balse markii danbe ku qaatay hamigiisa ah inuu ku biiro ciidamada Booliiska .
Ugu danbayn ,Ibraahim ayaa ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1990-kii ,waxaana isaga iyo qoyskiisa ay magaalada Qaahira u soo Wareegeen Sannadkii 2001-dii, isagoo dugsiga dhexe ku qaatay dalka Masar ka hor intii uusan u wareegin Portaland, waxaana uu ka qalin-jabiyay dugsiga sare ee Wilson.
Khaalid oo sidoo kale ka qalin-jabiyay Jaamacadda Portland state University (PSU) ayaa la Sheegay in uu tusaale u yahay Bulshada Somaalida ah ee Portland, Waxaana Shaqadan loo dhiibay la filayaa in uu ka soo dhalaalo.
By: Faysal Mohamed